५. महानताका सूत्र - Harish Bk
Home/ Article/५. महानताका सूत्र
Harish BK October 17, 2017
0 6,346 1 minute read
चिनीयाँ समाजमा लाओत्सु र बुद्धले भन्दा बढी प्रभाव छोड्न सफल मान्छे हुन्– कन्फुसियस । उनी यति महान् कसरी भएत ? भन्ने जिज्ञासा सहजै जाग्दो हो । मोटामोटी रूपमा कोट्याउँदा ३ कुरा भेटिन्छन् । १) उनका बुबा ७० वर्ष भएपछि तरूणी श्रीमतिबाट उनी जन्मेका थिए ।
२) उनी हरदम अध्ययन–अनुसन्धानमा व्यस्त रहन्थे । ३) उनी संगीतमा डुेबर तनाव मुक्त हुन्थे । पछिल्लो समयमा महान् व्यक्तित्वको बारेमा वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाउन भ्याए भने– सबै जसो महापुरूषहरू बाबु ४०वर्ष कटेपछि र आमा २५ वर्ष कटेपछि जन्मेका हुन् । भन्नु पर्दैन, बाबाआमा जति प्रौढ हुँदै जान्छन्, त्यति नै उनीहरुका अनुभव र ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ । र, यी अनुभवजन्यज्ञानहरू उनीहरूको जिन्सद्वारा छोराछोरीमा सारिन्छन् । त्यसैले देख्नमा के आउँछ भने– जेठा, माइलाभन्दाकान्छाकान्छी बढी चलाख हुन्छन् । अतः प्रौढ आमाबाबाबाट जन्मेका कन्फुसियसले प
नि जन्मजात ज्ञानगुण बाकेर आएभन्न करै लाग्छ । र, यस कुराबाट हाम्रो पुस्ताले प्रेरणा लिएर प्रयोगमा उतार्न सक्छ । प्रसंग बदलौँ, वैज्ञानिकहरू झण्डै २ सय वर्षदेखि अत्यन्त सफल हुने मान्छेको विशेषताबारे खोजी गर्दै आइरहेका देखिन्छन्। सफल हुने सबै मान्छेको एउटा विशेषता निर्विवाद रूपमा आएको देखिन्छ । त्यो हो– अध्ययनशीलता । उनीहरू सानैउमेरदेखि आफ्नो विषयवस्तुमा केन्द्रीत रही जिन्दगीभर अध्ययन र अुनसन्धान चालू राख्छन् । यहाँनेर विश्वविख्यातचिनीयाँ भनाइ सार्थक हुन आउँछ– कोक्रोदेखि कात्रोसम्म पुग्दा पनि ज्ञानको खोजी जारी राख । यो भनाइको मूर्त रूप हुन्–कन्फुसियस । पछिल्लो समयमा अन्वेषकहरूले ठोकेरै भनेका छन्– रीडर्स आर लीडर्स अर्थात् पढुवा नै अगुवा हुन् । भन्नपर्दैन, कन्फुसियस चिनीयाँ समाजका कालजयी अगुवा बनेका छन् । कन्फुसियसलाई यत्रो उचाइ प्रदान गर्ने अर्काे खम्बा हो, उनको संगीत–प्रेम । आफ्नै आमाको उत्प्रेरणाबाट उनी संगीतक्षेत्रमा आएका हुन्् । जब–जब दिमाग विचार र कर्मको बोझबाट थाक्छ, मान्छे त्यसबाट भाग्न जाँडरक्सीदेखिनकारात्मक कुराको साहारा लिन्छ र त ऊ पतन हुन्छ । तर, कन्फुसियसले यस दुष्प्रभावबाट बच्न संगीतको सहारा लिए ।जुन एक किसिमको ध्यान–साधन नै हो । उनले भन्न भ्याएका छन् कि, संगीतमा डुब्नुबाट यस्तो आनन्द जन्मिन्छ, जुनअरू कुनै सांसारिक कुराबाट सम्भवै छैन ।
२९. जन्मजात गुण
१०. हिटलर र संगत